Fandresen’ny Fikatrohan’ny Olom-pirenena Rehefa Nangatahan’ny UNESCO ny Hampiatoana Ireo Tetikasa Fanorenana Rehetra Ao Amin’ny Farihy Ohrid · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 16:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Português, русский, English
Ny gisan'ny Farihy Ohrid . Sary avy amin'i Elena Nikolovska, CC-BY.
Tamin'ny dia farany nataon'ny UNESCO tany amin'ny faritra Ohrid any Makedonia no nahitana fa rahonan'ny filan'ny fifamoivoizana sy ny fizahan-tany, ny tetikasan'ny fotodrafitrasa tsy manara-penitra ary ny fivelarana an-tanandehibe tsy voarindra ity toeram-bakoka Natoraly sy Ara-kolontsaina ity. Namoaka tatitra mangataka amin'ny governemanta Makedoniana hampiato ny tetikasa fanorenana ao amin'ny faritra avy hatrany izy ireo .
Efa misy 3 tapitrisa taona ny Farihy Ohrid ao Makedonia ary tranainy indrindra amin'ny farihy ao amin'ny kaontinanta Eoropeana izay manana rakitra sarobidy momba ny fivoaran'ny tontolo ankoatra ny maha fonenan'ny karazam-biby tsy manam-paharoa sy tsy fahita firy azy. Tamin'ny taona 2016, tandindonin-doza ity farihy ity rehefa nanomboka drafitra fanavaozana an-tanandehibea ny governemanta Makedoniana izay manamorona ny farihy sy ny tendrombohitra Galichica ary nanova ireo toerana manandanja amin'ny zavamananaina roa ireo ho toeram-pialamboly goavana.
Nampitandrina mikasika ny mety ho fiantraikan'ireo tetikasa ireo ao amin'ny Farihy Ohrid ny olom-pirenena mpikatroka, ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, ary ny mpahay siansa sady nitaky ny fampiatoana tanteraka ny asa fanorenana rehetra ao amin'ny faritra Ohrid.
Tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity, nankatoavin'ny iraky ny UNESCO tany amin'ny faritra Ohrid ny fitarainan'ny olom-pirenena sy ny manam-pahaizana momba ny tetikasa manodidina ny farihy. Nangataka tamin'ny governemanta mba hampiato ny tetikasa ny UNESCO mba hiarovana ny Farihy Ohrid, ary nanolo-kevitra mba hampiroborobo ny fandaharan'asan'ny fizahan-tany maitso ao amin'ny faritra:
Nitaky ny fampitsaharana ny tetikasa fananganana foibe fanaovana ski ao Galičica, sy ny itazonana ny faritry ny valan-javaboary amin'ny endriny amin'izao ny iraka, ary nanolo-kevitra ny fomba hiheverana ny fampiroboroboana ny fizahan-tany maitso izay tsy hitondra fiantraikany ratsy amin'ny toerana. Noho izany dia voalaza fa nangataka tamin'ny Antokon'ny Fanjakana hampitsahatra ny tetikasa fanorenana ao amin'ny toeram-pialamboly fanaovana ski Galičica ny Komitin'ny Vakoka Manerantany UNESCO, sy ny fampitsaharana ny ampahany (a) sy (e) amin'ny lalana A3 ihany koa. – hoy ny fanapahan-kevitra farany avy amin'ny komity.
Ny vondrona SOS Ohrid no lohalaharana tamin'ny tolona hamonjena ny Farihy Ohrid hatrany am-boalohany. Navoakan'izy ireo ny fanapahan-kevitry ny UNESCO izay mandrisika ny governemanta Makedoniana sy ny Banky Eoropeana ho amin'ny Fanarenana sy ny Fampandrosoana (EBRD) mba hampitsaharana ny mety ho fanapotehana ny Farihy Ohrid.
.@UNESCO#recommends “to completely abandon the #Galičica ski centre project, keep the internal national park zoning as it is”. #UNESCOSayspic.twitter.com/YmrehT5SQJ
Soso-kevitry ny UNESCO : “hampiato tanteraka ny tetikasa ao amin'ny foibe fanaovana ski Galičica, ary hitandrina ny faritra anatin'ny valan-javaboary ho amin'ny endriny ihany”
Mandritra izany fotoana izany, nitady ny fomba hafa hanoloana ny fananganana tetikasa fotodrafitrasa tsy handringana ny natiora sarobidy ny Foibem-Pikarohana ara-Tontolo Iainana sy ny Torohay Eko-svest avy any Skopje. Kasaina ho velabelarina ao amin'ny kaominina Ohrid amin'ity taona ity ny fikarohana mampety ho an'ny vahaolan'ny fitaterana maharitra.
Te hanamarika ny #Andron'nyFarihy izahay amin'ny alalan'ny fizarana ny famisavisanay ny làlan'ny bisikileta manodidina ny Farihy Ohrid. Tsara tarehy!
Mba tsy hananganana lalalambe vaovao nahavatsava ny alan'ny valan-javaboary sy hanakana ny fidiran'ny rano, dia nanolo-kevitra ny vondrona hampiaraka fitaovam-pitaterana fisolo izay tsy hanohintohina ny rafitra ara-tontolo iainana.
Sary mampiseho ny vahaolan'ny fitaterana Smart Ohrid miaraka amin'ireo làlana ho an'ny bisikileta , ny sambo sy ny fiarabe fitaterana mandeha amin'ny masoandro manodidina ny farihy. Sary avy amin'i Stefan Bouzharovski, nahazoana alàlana.
Ho fankalazana ny 21 Jona, andron'ny Farihy Ohrid, nanokatra ny varavarany ho an'ny fiarahamonim-pirenena ny governemanta Makedoniana vao voafidy , ary nikarakara hetsika tao amin'ny parlemanta izay nahitana ny filohan'ny Antenimiera niteny tamin'ny vahiny.
Tena faly aho fa anio eto amin'ny Antenimieran'ny Repoblikan'i Makedonia dia misy ny hetsika mifandray amin'ny fandraisana andraikitry ny sehatra sivily ho amin'ny fiarovana ny faritra Ohrid izay hany faritra ao amin'ny Repoblikan'i Makedonia arovan'ny UNESCO. – hoy ny Filohan'ny Antenimiera, Atoa Talat Xhaferi
Nanoritra ny fahavononan'ny governemanta mba hifanakalo hevitra sy hanohana ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny filohan'ny Parlemanta. Nitsangana ihany koa ny vondron'ny mpikambana vonjimaika ao amin'ny Parlemanta avy amin'ny antoko isankarazany atao hoe “Sakaizan'ny UNESCO.”
Manolotra ny filohan'ny parlemanta ny fiarahamonim-pirenena ao Makedonia, mangataka ny hiarovana ny farihy Ohrid sy ny faritra ny minisitra miaraka amin'ny olom-pirenena. Misokatra ho an'ny olom-pirenena ny Parlemanta
Naharitra sy sarotra ny ady kanefa mbola manantena ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena fa hahazo fanohanana ny fandresena voalohany amin'ny fitandremana sy ny fiarovana ny harena voajanahary ao amin'ny Farihy Ohrid.